Kitra – «Poule des As»: hanala vela amin’ny Elgeco Plus ny Fosa Jr, anio | NewsMada
Kitra – «Poule des As»: hanala vela amin’ny Elgeco Plus ny Fosa Jr, anio
Hotanterahina amin’ity faran’ny herinandro ity, ny andro voalohany eo amin’ny fifanintsanana amin’ny “Poule des As”, dingana farany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Hanokatra izany, amin’ity asabotsy ity, ny lalaon’ny Elgeco Plus Analamanga sy ny Fosa Jr Boeny. Fihaonana hatao etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina.
Hampiantrano ny ekipan’i Boeny, amin’ity ny Elgco Plus. Fanindroany amin’izao, ny ekipa roa tonta no hifanehatra. Iray volana lasa izay, nikatroka teo amin’ny lalaom-bondrona, ho an’ity fifaninanam-pirenena, ity. Resin’ny Elgeco Plus, tamin’ny isa, 2 no ho 1, tamin’io ny Fosa Jr. Hanala vela izany, eto ry Dax sy ry Jean-Yves.
Andrasan’ny rehetra tokoa ity lalao ity, satria hiendrika famaranana mialoha ny fotoana. Ny fihaonana faharoa indray, ny fikatrohan’ny FC Vakinankaratra sy ny Cnaps Sport Itasy. Hanafika eny Vontovorona ry zareo Vakinà. Lalao hotontosaina rahampitso alahady 5 aogositra. Heverin’ny rehetra fa hanana tombony ny Cnaps Sport, izay hilalao eo amin’ny kianja mahazatra, azy ireo. Na izany aza, tsy maintsy hanohitra mafy ny FC Vakinankaratra, izay efa naneho ny fahavononany, handresy.